လည်ပင်းဒဏ်ရာကြောင့် ဆွီဒင်နဲ့ကစားမယ့်ပွဲကို လွဲချော်မယ့် ဟမ်းမဲလ်
ဆွီဒင်နဲ့ပွဲကို နောက်ခံလူ ဟမ်းမဲလ် Hummels လွဲချော်မယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဂျိုအာချင်လိုး Joachim Low
23 Jun 2018 . 4:45 PM
ဂျာမနီအသင်းနည်းပြ ဂျိုအာချင်လိုး Joachim Low က အသင်းနောက်ခံလူ ဟမ်းမဲလ် Hummels ဟာ လည်ပင်းဒဏ်ရာကြောင့် ဆွီဒင်နဲ့ကစားမယ့်ပွဲကို လွဲချော်မယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်။ ဟမ်းမဲလ်ဟာ မက္ကဆီကိုအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဂျိုအာချင်လိုးရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကို ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုဝေဖန်ခဲ့လို့ ဂျိုအာချင်လိုးက သူ့ကို လူစာရင်းက ချန်လှပ်ခဲ့တာလားလို့ ထင်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျိုအာချင်လိုးကတော့ ဟမ်းမဲလ်ရဲ့လည်ပင်းဒဏ်ရာက သက်သာခြင်းမရှိလို့ ဆွီဒင်နဲ့ပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး ရူဒီဂါ Rudiger ကို အစားထိုး သုံးစွဲသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။
ဂျိုအာချင်လိုးက”ဟမ်းမဲလ်ဟာ ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူရဲ့လည်ပင်းရိုးမှာ တစ်နေ့ကတည်းက နာကျင်တဲ့ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီး အခုအချိန်အထိ သက်သာလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဟမ်းမဲလ်ဟာ အသင်းနဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းမဆင်းနိုင်ပေမယ့် အနားယူဖို့ အချိန်လုံလုံလောက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဒဏ်ရာမျိုးက တစ်ညတည်းနဲ့ ကောင်းလာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီအသင်းဟာ အုပ်စုအဖွင့်မှာ မက္ကဆီကိုအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲတာကြောင့် အခု ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာ အမှားလုပ်လို့မရတော့ဘဲ ရလဒ်ကောင်းရယူဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
Photo: Sports Illustrated,European Soccer
ဆှီဒငျနဲ့ပှဲကို နောကျခံလူ ဟမျးမဲလျ Hummels လှဲခြျောမယျလို့ အတညျပွုခဲ့တဲ့ ဂြိုအာခငျြလိုး Joachim Low
ဂြာမနီအသငျးနညျးပွ ဂြိုအာခငျြလိုး Joachim Low က အသငျးနောကျခံလူ ဟမျးမဲလျ Hummels ဟာ လညျပငျးဒဏျရာကွောငျ့ ဆှီဒငျနဲ့ကစားမယျ့ပှဲကို လှဲခြျောမယျလို့ အတညျပွုပွောကွားခဲ့တယျ။ ဟမျးမဲလျဟာ မက်ကဆီကိုအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ခမြှတျခဲ့တဲ့ ဂြိုအာခငျြလိုးရဲ့နညျးဗြူဟာတှကေို ဝဖေနျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှထေဲက တဈဦးဖွဈပွီး အဲဒီလိုဝဖေနျခဲ့လို့ ဂြိုအာခငျြလိုးက သူ့ကို လူစာရငျးက ခနျြလှပျခဲ့တာလားလို့ ထငျစရာဖွဈခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဂြိုအာခငျြလိုးကတော့ ဟမျးမဲလျရဲ့လညျပငျးဒဏျရာက သကျသာခွငျးမရှိလို့ ဆှီဒငျနဲ့ပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပွီး ရူဒီဂါ Rudiger ကို အစားထိုး သုံးစှဲသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။
ဂြိုအာခငျြလိုးက”ဟမျးမဲလျဟာ ဆှီဒငျနဲ့ပှဲမှာ ပါဝငျကစားနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ သူရဲ့လညျပငျးရိုးမှာ တဈနကေ့တညျးက နာကငျြတဲ့ဝဒေနာ ခံစားနရေပွီး အခုအခြိနျအထိ သကျသာလာခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ ဟမျးမဲလျဟာ အသငျးနဲ့အတူ လကေ့ငျြ့ခနျးမဆငျးနိုငျပမေယျ့ အနားယူဖို့ အခြိနျလုံလုံလောကျရှိပါတယျ။ ဒီလိုဒဏျရာမြိုးက တဈညတညျးနဲ့ ကောငျးလာတာမြိုး မဟုတျပါဘူး”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဂြာမနီအသငျးဟာ အုပျစုအဖှငျ့မှာ မက်ကဆီကိုအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲတာကွောငျ့ အခု ဆှီဒငျနဲ့ပှဲမှာ အမှားလုပျလို့မရတော့ဘဲ ရလဒျကောငျးရယူဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။
by Naing Linn . 43 mins ago